MasoArabo: Tsia ho an’ireo Bilaogy ‘Manafintohina’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Janoary 2019 7:33 GMT
Mampirisika ireo mpanoratra bilaogy hitatitra ireo bilaogy ‘manafintohina’ ny Firaisamben'ny Bilaogera Arabo. Ny tanjona amin'izany dia ny hanapahana ny fihanaky ny fitaovana manafintohina anaty aterineto, izay lazain'ny firaisambe fa mandrahona ny fomba fisainantsika, ny fitsipi-pitondrantenantsika ary ny soatoavintsika.
Nipoitra tao amin'ny pejin'ny bilaogy Arabo Maktoob ity taratasy manaraka ity, nosoniavin'ny filohan'ny firaisambe, Dr Mohammed Shadi Kaskeen, bilaogera sy poeta Syriana mipetraka any Soeda. Mivaky toy izao izany:
Ho an'ireo mpandrindra ny Maktoob sy ny vondrompiarahamonin'ny fanoratana bilaogy,
Amin'alahelo goavana no nanarahan'ny Firaisamben'ny Bilaogera Arabo ny fipoiran'ireo bilaogy manafintohina sasany, izay mitoraka fiampangana sy mampiasa fomba fiteny manambany ny fivavahana, ireo mpaminany sy ireo finoana, manitsakitsaka ny Masina, mametraka fisalasalana momba ireo soatoavina sy finoan'ny vondrompiarahamonintsika ary manararaotra ny fitsipi-pitondrantenantsika. Ary koa satria mino izahay fa vohikala fanoratana bilaogy Arabo ranoray ny Maktoob, tokony hanaraka ny fitsipi-pitondrantenantsika sy ny soatoavintsika ireo rehetra miditra ho mpikambana ao ary koa satria fonenan'ny bilaogera rehetra ny Firaisamben'ny Bilaogera Arabo no sady fiarovana ny zon'ireo bilaogera sy ny heviny, manohana ny fahalalahana hino sy ny fananan-kevitra, ary ireo fahasamihafàna izay mitondra fanarenana, mampirisika ny Maktoob izahay hamafa izay bilaogy rehetra mihoa-pefy amin'ny fanehoankevitra sy ny finoana amin'ny fanitsakitsahana an'Andriamanitra, ireo Mpaminany, finoana, bokim-pinoana, fitsipi-pitondrantena ary soatoavina. Miantso ny fandrarana ny fiverenan'ireo bilaogera (nandika lalàna) hiditra ireo ao amin'ny Maktoob ihany koa ny Firaisambe. Mampirisika ireo bilaogera ny Firaisambe hanoratra aminy sy hampahafantatra azy mikasika izay bilaogy manafintohina, tsy mamoaka ny rohin'ireto farany mba hiresahana ireo hafany manafintohina ao amin'ny bilaogy satria izany indrindra no tena tanjon'ireo mandika lalàna. Hamela ny varavarana hisokatra ho an'ny fiarahamiasa amin'ny mpandrindra ny Maktoob ny Firaisamben'ny Bialogera Arabo mba hamaranana ny fihetsika manafintohina sahala amin'izao izay fanentanana feno fankahalana sy mikendry ny firenentsika, ireo soatoavintsika ary ireo finoantsika.
Nilaza izao ny mpaneho hevitra iray tao amin'ilay lahatsoratra:
Tena mahafinaritra! Miantso ny hamafàna ireo bilaogy ny Firaisamben'ny Bilaogera ary mampirisika ireo bilaogera hiasa ho mpanome vaovao sy hanara-maso ireo bilaogy hanampiana azy ireo hamafa izay bilaogy maro indrindra azony fafàna!!
Nanoratra ny mpaneho hevitra iray hafa:
Heveriko fa tokony ho Mpanaramaso ny Bilaogera Arabo no anarana mendrika azy, na ilay Fanantonana ny Bilaogera Arabo. Mino ihany koa aho fa tokony hampivondrona ny olona manana fitoviana ny firaisambe iray, izay mivondrona araka ny sitrapony mba hahazoany tombontsoa betsaka amin'izany fiombonany izany. Aiza ho aiza ny tombontsoa eto?
Nitsikera ny fanintelony:
Ry Dr malala,
Misy fahasamihafàna goavana be eo amin'ny famafàna ireo teny manafintohina, izay mandika lalàna, sy ny famafàna ny bilaogy iray manontolo.